Icardi oo farriin qiiro xambaarsan u diray Wanda Nara kaddib guushii ay xalay PSG ka gaartay RB Leipzig – Gool FM
Ahmed Nur October 20, 2021
(Paris) 20 Okt 2021. Kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ayaa xalay ciyaar soo laabasho leh 3-2 kaga adkaatay kooxda RB Leipzig inkastoo uu ka maqnaa weeraryahanka arrimaha qoyskiisa ay saxaafadduu hadal heyso ee Mauro Icardi.
Dagaal dhaliyay inay xaaska Icardi dalbato furriin ayaa warbaahinta qabsaday Sabtidii iyadoo farriintiisii xalay ay u muuqatay mid qaboojineysay xaaladda taagan sida laga dheehan karo waxaana loo badinayaa inay qoyskaan dib u midoobayaan kaddib maalmo ay kala fogaadeen.
“Mahadsanid jaceylkeyga maadaama aad sii wadday inaad aaminto qoyskan quruxda badan, waad ku mahadsan tahay jaceylkeyga inaan matoor u tahay nolosheenna. Waan ku jeclahay” ayuu u dhignaa qoraalkii uu weeraryahanka reer Argentina soo dhigay bartiisa Instagram isagoo qoraalkas ugu dhex yeeray (tag) xaaskiisa Wanda Nara.
“Dhaawac dararn ayay leedahay marka aad dhaawacdo kuwa aad jeceshahay, waxaad nasiib leedahay marka aad cafis ka heleyso qofka aad dhaawacday” ayuu sii raaciyay.
Si kastaba ha ahaatee, illaa iyo haatan ma jiro war ka dambeeyay furiinkii ay dalbatay Wanda oo ka yimid dhankeeda iyadoo warbaahinta ay si dhow ula socoto dhaq-dhaqaaqa baraheeda bulshada.
Barcelona oo qandaraas cusub kala heshiisay Ansu Fati... (Immisa sano ayuu sii joogi doonaa Camp Nou?)